Debian 11 inotiratidza iyo Wallpaper iyo Bullseye ichashandisa | Linux Vakapindwa muropa
Debian 11 inotiratidza iyo Wallpaper iyo Bullseye ichashandisa
Kwete, zvine musoro haisi iyo yauinayo pamusoro pemitsara iyi. Asi chirongwa cheDebian chakatoburitsa chichava chii debian 11 Wallpaper, iyo ichave yakatumidzwa zita rekuti Bullseye. Kana iri iyi, uye semamwe mavhezheni kubvira Buzz, hunhu kubva kuToy Story, mune iyi bhiza ratinoziva muchiSpanish sePerdigón, rinozvibata kunge imbwanana uye rinonakidzwa nekufamba naWoody naJessie.
Kana iri iyo Wallpaper iyo pachayo, ndiyo yauinayo pazasi pemitsara, ine bhuruu yekumashure uye izvo zvinoita kunge inverted cube. Kana tikashandisa kufunga kwedu, tinogona kuuya kufunga kuti chimiro chepakati imhino yebhiza, iyo inobatsirwa nechinzvimbo chechiratidzo cheDebian chingaita seziso. Chero zvazviri, ichi chingori chiratidzo chega, kwete chimwe chinhu chepamutemo sezita rako uye dhizaina.
Debian 11 Bullseye iri kuuya muna 2021
Sezvatinoverenga mune izvi chinyorwa chepurojekiti, iyo Wallpaper inonzi «Homeworld» uye chisikwa chaJuliette Taka. Mugadziri wayo anoti akafuridzirwa nemaitiro Bauhaus, uyo akaberekwa muzana ramakore rechi 20 muGermany. Homwe iyi ndiyo yakahwina pane gumi nemasere yakasvika yekupedzisira, uye kunyangwe chiri chokwadi kuti zviri nyore kupa maonero izvozvi kuti makwikwi atopera, chokwadi ndechekuti ndiyo yepakutanga, kana hazvo iyo ingave iri nani kumashure kuDebian isina kufanana nechero mufananidzo. yeiyo system iyo yatinowana pane internet.
Chimwe chokwadi hachisi chekuziva: Juliette akunda mukwikwidzi wekutsvaga mari katatu kare, naDebian 11 ari wechitatu. Asati azviita muDebian 8 uye Debian 9, saka angadai akave nechikamu cheplnary dai akahwina iyo yazvino Buster.
Debian 11 Bullseye haina zuva rekuburitsa parizvino, asi ichauya kutenderera zhizha 2021. Kana iwe uchifarira, unogona kurodha pasi «Homeworld» kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Debian 11 inotiratidza iyo Wallpaper iyo Bullseye ichashandisa
Iyo De-RISC chirongwa chinotendeuka gore rimwe chete: Makorokoto!
Google iri kudzoreredza akawanda marongero ayo, asi Google Mifananidzo inogona kunetsa